Izu Mmadu gi Ime ka data B2B di ọcha | Martech Zone
N'izu gara aga, mụ na ndị folks nwere mkparịta ụka dị ukwuu NetProspex, sọftụwia dị ka ihe eji arụ ọrụ nke na - enye gị ohere ịkwalite na nyochaa azụmaahịa gị na ndekọ ndekọ kọntaktị azụmahịa. Usoro a bara ọgaranya, na-agbakọ data na ihe karịrị 21 nde kwupụtara kọntaktị B2B.
Mgbe ụfọdụ, ọ dị mfe ịnakọta aha, adreesị ozi-e ma ọ bụ akụkụ ụfọdụ nke ozi ndị otu. Agbanyeghị, ndị mmadụ na-ebugharị ọrụ kwa afọ ole na ole na nkezi, yabụ ọdụ data B2B na-adịkarị ike. Emailing ndị nwụrụ anwụ ndekọ nwere ike ịbụ oghom mmetụta gị email deliverability na ọbụna ina-egbochi gị. Na mgbakwunye, ọ naghị enyere ndị ahịa gị aka mgbe ndị ndu gị jiri data ele mmadụ anya n'ihu.
NetProspex na ejikọkọta ọnụ na CRM gị na enweghị nhịahụ ma na - eweta ngwa ngwa API nke mere na usoro ndị dị na mpụga nwere ike ịsacha ma bulie data ha aka na akpaghị aka. Dị ka ihe agbamume, mgbe ị bulite ihe ndekọ ọhụrụ na NetProspex, a na-enye gị akwụmụgwọ… ebe ị bụ akụkụ nke igwe mmadụ ahụ na-enyocha data ahụ! Nke ahụ bụ ụzọ aghụghọ nke ụlọ ọrụ ọhụrụ na-adọrọ adọrọ iji sonye na ọrụ ahụ ma na-akwụ ụgwọ maka ndị ahịa ahụ!
Nke a bụ otu Netprospex si arụ ọrụ:
Ndị ọrụ na-agbakwunye kọntaktị na NetProspex nchekwa data maka kọntaktị ọhụrụ. A na-eji ọtụtụ teknụzụ nwere ikike iji hụ na a nyochara data sitere na igwe mmadụ ma na-echekwa ogo nchekwa data na oge.
NetProspex's web search tool na-enye nnukwu visibiliti n'ime ndị na-ege ntị lekwasịrị anya, ma na-enye ndị ọrụ ohere ịkepụta atụmanya site na ịdebe njirisi gụnyere ọrụ ọrụ, ụlọ ọrụ, ogo ụlọ ọrụ, ọnọdụ mpaghara, ụlọ ọrụ akọwapụtara, aha, itinye aka na teknụzụ, na ndị ọzọ.
A na-enye ndekọ njedebe na ozi kọntaktị, ozi profaịlụ ọha na eze, na ụbọchị na akara nke gosipụtara ziri ezi na oge edepụtara ndekọ ahụ.
Usoro a dị oke ọnụ (yana nkwa dị mma) bido na $ 0.75 kwa ndekọ. Costgwọ a ga-ebelata ma ọ bụrụ na ịzụta ihe nbudata na-ebudata tupu oge eruo… n'ụzọ niile ruo 18 cents kwa ndekọ maka nde 1 nde. Maka onye ọ bụla zụrụ ọrụ nhicha data n'oge gara aga… nke a bụ ọnụahịa. Echefula na inwetara otuto maka mbugo gị!
I nwekwara ike jiri NetProspex's ike ọchụchọ:
Maka ndị gị na-eche usoro dị ka nke a nwere ike bụrụ ntakịrị ihe ọjọọ: Mgbe a na-erere ihe ndekọ na NetProspex, a ga-amara onye ana-akpọ ma nye ya ohere iji pụọ, ma wepu ozi ha na NetProspex nchekwa data.Nke ahụ bụ nzọụkwụ dị elu site na sistemụ ndị ọzọ na-achịkọta ma na-ere data gị n'ebughị ụzọ! Tụkwasị na nke a, NetProspex chọrọ ka ndị ahịa ha kwenye na CAN-SPAM tupu ha ejiri ndekọ maka email.
Kedu ihe dị njọ na akụkụ anọ nke anọ?
Ọkt 6, 2011 na 2:35 PM
So Doug, nke a bụ mgbasa ozi? Maka na ị depụtara ọtụtụ ụgha dị egwu n'isiokwu a nke yiri ka ọ bụ ihe ọ bụla karịa ntinye mgbasa ozi dị ebube. Akụkụ banyere nyochaa izi ezi nke email… yeah, nke ahụ abụghị eziokwu, n'ihi na adreesị email m dị na ndepụta ha. Ọ bụrụ na mmadụ ga-akpọ m ma sị "Hey, ọ dị mma ma ọ bụrụ na anyị rere adreesị ozi-e gị na ndị ọzọ?" Mara ihe azịza ya ga-abụ?
Adreesị email m rutere na nchekwa data a ma nọrọ na hel na-anwa iwepụ ya. Enwere m mmasị na obere okwu gị gbasara iwu "pụọ" ebe ndị a na-emesapụ aka ga-akpọ ma jụọ "Mr. onye ahịa, anyị zụtara adreesị ozi-e gị site n'aka ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-ere ahịa na-ekpebi na ya enweghị obi ụtọ naanị na ọ na-erite uru na irere gị, ya mere ọ resịrị gị, yabụ na-eche ma ọ bụrụ na anyị rere ndị ọzọ ozi gị ”N’ihi na ejiri m n’aka na nde mmadụ iri abụọ na otu ga-ekwenye na ndị ọbịbịa agaghị achọgharị ha. O yiri ka odi iche, i cheghi? Ọ dị mma ịmara bụ na emeela m ụfọdụ ndị ahịa ha ka njọ na NetProspex, yabụ enwere m ike ịtụ anya na ha tufuru ụfọdụ azụmaahịa n'ihi nsogbu m.
Nke a bụ ala Doug; ị B EGH E ndị ọbịa email na mgbasa ozi iji zụta ihe nzuzu. Ọbụghị na ị naghị ezigara ndị bịara abịa ozi iji zụta ihe nzuzu dị mkpa. Ọ bụ atụmatụ dara ada na-anaghị eme ihe ọbụla kama ịdebanye gị na sava ma mee ka ọnụ ọgụgụ gị mepee ma pịa ka ọ daa dị ka ilu ilu. The ahịa na i nwere ike ichebe site spam email, oku na faxes bụ kasị ala nkịtị denominator mgbe ọ na-abịa profitability. Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịghọgbu ndị mmadụ, kụrụ ha ike na ngwa ngwa wee pụọ n'ime abalị, mgbe ahụ, nke a nwere ike ịbụ mmemme maka gị! Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ iwulite iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa ma mee ka obi sie gị ike, mmemme a ga-abụ ntu n'ime igbe ozu gị. Ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe (ndị nwere ọgụgụ isi) anaghị azụta n'aka ndị spammers.
Ọkt 10, 2011 na 4:20 PM
Ndi ị ma ọ bụ na ị kwughị: “Mgbe a ndekọ na-traded ka NetProspex, kọntaktị na-amara gị ọkwa na-enye ohere iji pụọ na, na-ewepụ ozi ha si NetProspex nchekwa data.”
Ugbu a amabeghị m ihe ị na-atụle ụgha, mana mgbe ị na-ekwu ihe na-abụghị eziokwu, enwere m ihere maka etu nke ahụ ga-esi bụrụ eziokwu ọ bụla. NetProspex akpọtụghị m "ịrịọ ikike m."
Banyere iji email eme ihe, ka m gwa gị otu ihe ma ọ bụ abụọ gbasara ibu ọrụ. Anya isi na mmadụ adịghị akpachara anya na adreesị ozi-e ha bụ "enweghị isi." Anya isi n'ihi na oge na onye bụ nnọọ doro anya na maara na spam iwu na spam usoro anaghị ewe amara anya na ha adreesị ozi-e “na" amaghi. " Ọrụ m na-ejedebe mgbe òtù ndị na-adịghị mma na-eji adreesị ozi-e m maka uru mgbe ha kwuru na ha agaghị eme ya. Ọrụ m na-akwụsị mgbe ụlọ ọrụ na-akwụ ndị na-ede blọgụ ụgwọ ide ederede mara mma banyere ọrụ ha ka ha wee nwee ike ịsị na ha "dị iche." Mana ejiri m n'aka na akwụghị gị ụgwọ maka nyocha gị, n'ihi na anyị niile maara na ndị na-ede blọgụ na-ahụ n'anya iji ego ha na-eme njem gaa ụlọ ọrụ na-enweghị usoro ka ha wee nwee ike ide nyocha na-egbuke egbuke banyere ngwaahịa ha. N'ezie, naanị nchịkọta nchịkọta akụkọ gị na saịtị a na-egosi na ọ dị gị ka ị na-ebu ọtụtụ ngwongwo ụlọ ọrụ n'okpuru "isiokwu". O yiri ka anyị enweghị ike ịtụkwasị onye ọ bụla obi n'oge a, ọbụnadị njedebe ikpeazụ nke enweghị echiche.
Ọkt 10, 2011 na 5:25 PM
Ka anyị malite site n’ịkpọ ọkpọ na-aga n’ihu. Liegha bụ "okwu ụgha nke e ji ama ụma na-eduhie". M na-enye ndị nwere mmasị ịnye blog ozi na-enye n'efu iji nye ozi na ozi gbasara ngwaahịa ndị ga-enyere mbọ ahịa ụlọ ọrụ aka. Olee otú m si enweta ụgwọ ọrụ ma m ghaa ụgha? Ole ndị na - agụ ya ka m ga - enweta? Gịnị kpatara m ga-eji tinye aha m na azụmaahịa m n'ihe egwu dị otu ahụ?
Biko gụọ iwu Netprospex:
"Ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ ịpụ na ịnweta nnata ozi e-mail sitere na NetProspex ma kpochapụ ntuziaka ịpụ apụ na ozi email ma ọ bụ kpọọ anyị naanị na 1-888-826-4877."
You kpọrọ ha?
My blog post kọrọ otu usoro ahụ ha kọwara m na ngosipụta ha. Ọ bụrụ n ’iwe iwe gị banyere azụmaahịa“ jọgburu onwe ya ”onye na-ekekọrịta email gị ma ọ bụ jiri ya mee ihe n’ụzọ na-ezighi ezi, buru ya na ha! Achọrọ m nke ọma ka ị! Ọ bụrụ na ha mere ihe ị na-ekwu, agaghị m anabata nke ahụ n'ụzọ ọ bụla. Y’oburu n’echiche na ha emebila usoro oru ha, ghaa ha ikpe. Ọ bụrụ na ha emebi iwu SPAM, kọọrọ ha. Enweghị m ike inyere gị aka. Anaghị m arụrụ ha ọrụ. Etinyeghi m adreesị email gị na ha. Ezigaghị m gị email.
Ọ bụrụ na ị kwenyere na m na-emebi iwu FCC ma na-akwụ ụgwọ maka isiokwu na anaghị ekpughe ya, gaa kọọrọ m! Enwere m ike ijide gị na akwụkwọ m dị n'usoro. Enwere m nnukwu ndị na-ege ntị na-enwe ekele maka ọrụ m na blog na-aga n'ihu na-eme nke ọma. Achọghị m nkwado gị. Were nhụsianya gị na-ata ahụhụ ebe ọzọ.
Ọkt 14, 2011 na 1:43 PM
"Mgbe a na-erere ndekọ na NetProspex, a na-agwa kọntaktị ahụ ma nye ha ohere ịpụ, ma wepu ozi ha na NetProspex nchekwa data."
Continue na-aga n'ihu izere nke a ma achọrọ m ịjụ gị otu oge ọzọ, maka ndekọ ahụ, nke a ma ọ bụ na nke a abụghị iwu ha? You gbalịala ịchọpụta nke a ka ọ bụ na ị na-ewere okwu ha maka ya? Dịka m kwuru na mbụ, blọọgụ gị na-agụ dị ka mgbasa ozi, yana mgbe ị biputere nkọwapụta nke ụlọ ọrụ na-ezighi ezi, yana amụma ndị a na-agaghị agbasoro, a hapụrụ m ịjụ ihe kpatara ị ga-eji kọọ akụkọ na enweghị nkwenye nkwupụta ndị ahụ maka izi ezi? Ọ ga-adị ka ịgba ajụjụ ọnụ na-enyo enyo na igbu ọchụ ma jụọ ya ma ọ mere mpụ ahụ, wee kọwaa azịza ya dị ka nchọta nke eziokwu. Ma ọ dịkarịa ala, ikpe mara akụkọ nta akụkọ. Na-akpọ trolling a; M na-akpọ mmezi a (na m dị mma ebe a) eziokwu na-ezighi ezi.
Ma ọ bụrụ na m bụ otu, ị na-emebi iwu mbụ. Ejila troll nri.